အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူချောချောလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း - Myanmarload
အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူချောချောလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 13:11 October 24, 2019
အဆိုတော်အဖြစ်ကနေ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုပိုင်ရှင်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် တကယ့်ကိုအရည်အချင်းအပြည့်ရှိတဲ့ ထွန်းထွန်းက နှင်းဆီအဖွဲ့မှာလည်း လူရွှင်တော်အဖြစ် ပါဝင်တင်ဆက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းဆီအဖွဲ့မှာဆိုရင်လည်း ထွန်းထွန်းရဲ့ပြက်လုံးတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်ရယ်မောစေနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit- Htin Aung Htun's FB
လက်ရှိမှာတော့ ထွန်းထွန်းက ချောမောလှပတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းလေးကို လျှောက်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့မွေးနေ့မှာဆိုရင်လည်း ထွန်းထွန်းက အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေ တောင်းဆိုပေးထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ထွန်းထွန်းတို့စုံတွဲလေးကို သဘောကျနေကြပြီး အားပေးချစ်ခင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းထွန်းက " Happy Lovely Birthday ပါချစ်သူလေးရေ. ခုမွေးနေကနေနောင်နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာအစစအရာရာ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေ. လိုအင်ဟူသမျှ အကုန်ပြည့်ဝပြီးဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်အားလုံးပြည့်စုံပါစေ. ကိုကို့ကိုလည်း အခုထက်ပိုပြီးအများကြီးပိုချစ် ပိုနားလည် ပိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်. အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတည့်ပေါင်းများစွာကိုအတူတူဖန်တီးကြမယ်နော်. အရမ်းချစ်တယ်." ဆိုပြီး ချစ်သူလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit- Htin Aung Htun's FB & Sam Dara's FB